Deg deg ciidamo lagu daadiyay xafadaha guriceel iyo Howlgal Culus oo socda - HOBYOMEDIA
Home Uncategorized Deg deg ciidamo lagu daadiyay xafadaha guriceel iyo Howlgal Culus oo socda
Ciidamada Booliska Maamulka Galmudug iyo kuwa dowladda Federaalka ayaa howlgalo kala duwan ka wada Magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud, kadib markii xalay halkaas uu ka dhacay weerar loo adeegsaday Bam gacmeed.
Weerarkaas ayaa waxaa lagu qaaday Guri ku yaalla Xaafadda bilan gaar ahaan kasoo horjeedka Isbitaalka Qaaxada, waxaana deganaa Sarkaal lagu magacaabo Cabdullaahi Cabdi Raage oo ka tirsan Nabadsugida Galmudug, kaasi oo ka badbaaday weerarka.
Ciidanka Booliska Galmudug ayaa howlgalo kala duwan ka wada Guriceel, iyagoo ku raadinaya raggii ka dambeeyay weerarkii Bam gacmeedka ahaa ee halkaas ka dhacay, iyagoo baaritaano kala duwan ku sameeynaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan.
Sidoo kale Ciidamada ayaa su’aallo dhowr ah weydiinaya dhalinyarada iyo goobo ganacsi oo la sheegay in Ciidanka amniga ay bartilmaameed u yihiin, isla markaana howlgalkaas uu yahay mid qorsheysan.
Ma jiro Khasaaro ka dhashay weerarkii xalay ka dhacay Guriceel, waxaana weerarkaas uu noqonayaa midkii ugu horreeyay ay muddo 12-sanno, kadib ka dhacay halkaas, iyadoona Sarkaalka ka badbaaday uu kamid ahaa Ururkii Ahlusunna ee Galmuduga laga saaray.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay Qarax Ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho
Next articleAKHRISO +XOG: Qoor Qoor oo Heshiis Qarsoodi ah Turkiga kula gelaya Hoggaanka Ahlu suna